မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2017-04 > Self-ထိန်းချုပ်မှု
မပြောပါနဲ့။ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့နာမည်ကဂျင်မီ လူတိုင်းကသူ့ကိုကြိုက်တယ် သူကအရမ်းအလုပ်ကြိုးစားပြီးရက်ရောတယ်။ ဟာသဉာဏ်လည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဂျင်မီမှာလည်းပြaနာရှိနေတယ်။ မကြာသေးမီကသူရှေ့တွင်ယာဉ်တစ်စီးလှည့်သွားသောအခါအမြန်လမ်းပေါ်တွင်ကားမောင်းနေသည်။ ဂျင်မီသည်အရှိန်မြှင့်လိုက်ပြီးမာနထောင်လွှားသောယာဉ်မောင်းနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားခံအနီရောင်အလင်းမှာဆွဲထုတ်သောအခါ, ဂျင်မီအပြည့်အဝဘရိတ်ဝင်တိုက်ခဲ့ရသည်။ သူထွက်သွားပြီးကားရှေ့သို့ပြေးသွားသည်၊ ဘေးဘက်ပြတင်းပေါက်ကိုခတ်လိုက်သည်။ သူ၏သွေးထွက်သံယိုလက်မောင်းကိုပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်ထိုးနှက်ကာအံ့အားသင့်သွားသည့်ယာဉ်မောင်းကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်လက်စားချေခဏတာဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်ဂျင်မီကသူ့ရင်ဘတ်ကိုကိုင်ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။ တစ်နာရီအကြာတွင်သူသည်နှလုံးရှောင်လွှဲခြင်းလုပ်ငန်းငါးခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂျင်မီသည်ချုပ်တည်းမှုကင်းမဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဒေါသထွက်ရန်မလိုပါ၊ သို့သော်မကြာခဏဖျက်ဆီးခြင်းကဲ့သို့ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ခါးသီးခြင်း၊ စားကြူးခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ မာနထောင်လွှားခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်း၊
မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်း? စိတ်စွမ်းအင်? ကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး ။ “ မဟုတ်ဘူး” လို့ပြောပါ။
Das Neue Testament liefert uns einen wichtigen Hinweis, wie wir den Kampf um Selbstbeherrschung gewinnen können. Selbstbeherrschung ist eine Frucht des Heiligen Geistes (Galater 5,22-23). Es ist nicht unsere harte Arbeit, unsere Selbstdisziplin oder unsere Entschlossenheit, denn Selbstbeherrschung bringt der Heilige Geist in uns hervor. Er ist die Quelle. Das Wort ‚ Selbstbeherrschung‘ bedeutet ‚ im Griff haben‘ oder‚ etwas ergreifen‘. Der Heilige Geist schenkt uns die innere Fähigkeit, uns in den Griff zu bekommen und so zu leben, dass wir nicht von unseren selbstsüchtigen Emotionen und Begierden beherrscht werden (2. တိမောသေ 1,7). Wir schaffen es nicht einmal aus eigener Kraft «Nein» zu sagen. Titus schrieb, dass die Gnade Gottes uns aufzeigt, weltliche Begierden zurückzuweisen und besonnen und gerecht in dieser Welt zu leben (Titus 2,11-12). Aber der Heilige Geist hilft uns nicht nur, einer schlechten Gewohnheit zu widerstehen. Der Heilige Geist wirkt in uns, damit wir uns verändern und ersetzt selbstsüchtige Impulse durch das begeisternde, kraftvolle Leben Jesu Christi. Wir üben Selbstkontrolle, wenn wir uns – Schritt für Schritt – entscheiden (der Heilige Geist nimmt uns nicht den freien Willen), ihn als Quelle unseres Lebens anzunehmen und nicht nach unseren Vorlieben zu leben. Wenn wir dies tun, wird unser Verhalten christusähnlich werden. Eine elektrische Glühlampe zeigt an, dass Elektrizität vorhanden ist – wir zeigen an, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt.
ဆာလံ ၃9,11 geht er Psalmist näher darauf ein: «Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige.» Gottes Wort muss in unseren Herzen verankert sein. Es reicht nicht, es in einem Notebook oder in einem Computerprogramm zu speichern. Es muss in uns sein. Das Wort «behalte» wurde verwendet, wenn Schätze oder Vorräte versteckt oder gesondert aufbewahrt wurden, um für künftige Notfälle gewappnet zu sein. Wir speichern Gottes geschriebenes Wort, indem wir etwas ausüben, was sich in modernen Ohren eigenartig anhören mag – biblische Meditation. Meditation ist Nachsinnen, Nachdenken, Hören, Verinnerlichen und das wiederholte durch den Kopf gehenlassen von Bibelstellen ähnlich wie ein Hund an einem Knochen nagt. Meditation befähigt uns, Gottes Wort dort zu bewahren, wo es den grössten Einfluss auf unser Leben hat – in unseren Herzen (Sprüche 4,23). Wer die Bibel ausser Acht lässt, erlaubt, dass alte Muster falschen Denkens und zerstörerische unbeherrschte Gewohnheiten wieder die Autorität über ihn erlangen. Wenn wir unser Denken von der Schrift erfüllen und ernähren und sie in unserem Herzen Wurzeln schlagen lassen, wird Gottes Wort ein Teil von uns und das zeigt sich auf natürliche Weise in unseren Äusserungen und Handlungen.
ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ထားအမျိုးမျိုး၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားရမည်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ချုပ်တည်းမှုကိုသံစုံတီးဝိုင်း၏စပယ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ စပယ်ယာ၏တုတ်တံအောက်တွင်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဂီတသမားအမြောက်အမြားသည်သူတို့၏တူရိယာများပေါ်တွင်မှန်ကန်သောအသံအတိုးအကျယ်ဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းမှန်ကန်သောမှတ်စုများကိုဖွင့်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့၏လိုအင်ဆန္ဒများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအင်ဆန္ဒများကိုလည်းဖြောင့်မတ်စေသည်။ ချုပ်တည်းခြင်းဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ၀ န်ထမ်းဖြစ်သည်။ သူ၏စွမ်းရည်ပြည့် ၀ သောလမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်အရာအားလုံးသည်တည်ရှိပြီးအချိန်မီအတိအကျခေါ်ယူသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံယူရန်ချုပ်တည်းခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
Gebet: Lieber Vater, ich wünsche mir sehnlichst, ein selbstbeherrschtes Leben zu führen, jedoch ohne dich schaffe ich es nicht. Ich danke dir, dass du mir bereits alles gegeben hast, was ich benötige, um ein dir wohlgefälliges Leben zu führen (2. ဓာတ်ဆီ 1,3). Bitte erfülle mich mit innerer Stärke durch deinen Geist (Epheser 3,16), damit ich verantwortungsbewusst mit der von dir verliehenen Fähigkeit umgehen kann! Behüte meinen Mund und stärke mich, damit ich den Begierden des Leibes nicht verfalle (Römer 13,14). Befähige mich besonnen zu handeln und der zu sein, der ich wirklich bin – dein Kind (1. ဂျိုဟန် 3,1). Ich bin in deiner Hand. Lebe jetzt in und durch mich. In Jesu Namen Amen.
ဒီဝေါဟာရနှစ်ခုကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုမရောထွေးသင့်ပါ။ ချုပ်တည်းခြင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ရှေ့မှောက်တွင်ရှိပြီး၊ မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ပြင်ပအချက်များဖြစ်သောအစားအသောက်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယာယီလိုအပ်သည်ဟုသတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာလေ့ရှိသည်။